Ithoyizi lebhayisikili lezingane ezihamba phambili ngesibambo esiqondile seminyaka engu-1-3 ibhayisikili lokuhamba kwezingane lezingane nezingane ibhayisikili elihamba ngezinyawo 4 amasondo ibhayisikili ibhalansi labafana namantombazane Umkhiqizi kanye neFektri | Ukudla
I-LBLA izingane ezilinganisa ithoyizi lebhayisikili ngesibambo esiqondile seminyaka engu-1-3 ibhayisikili lokuhamba kwezingane lezingane nezingane izingane ezihamba ngebhayisikili ibhayisikili amasondo amane ibhalansi yebhayisikili labafana namantombazane
Isisindo sento 0.3 Kg
[Izinto eziphephile]: Leli bhayisikili lebhalansi lengane lenziwe ngezinto zekhwalithi ephezulu kakhulu ze-EVA. Inezitifiketi ze-CE / EN71, idizayini engunxantathu nohlaka oluqinile lokugwema ubungozi bamafreyimu aqhekeka kalula
[Right Handlebar Design]: Ibha yokubamba elungile ilungele izingane ukuba zibambe, okwenza izingane ziphephe. Ibhayisikili lebhalansi lomntwana lifakwe amasondo ama-4 kanye nesiteringi esilinganiselwe esingu-135 ° ukuvikela ingane ukuthi ingawi phansi ngengozi. Kwenza ibhayisikili lizinze ngokwengeziwe, livimbele ukuwa kwengane futhi amathayi enwetshiwe enza kube lula ukulawula ibhalansi. Kuphephile ezinganeni zakho.
[Kulula ukuhlangana]: Le teepee iyasuswa futhi iyagezeka, inikeze indawo yokuhlala enempilo yezilwane ezifuywayo. Futhi, kulula kakhulu ukuhlangana uhambe nawe.
[Umcamelo we-Ergonomic nokuphakama]: Isihlalo saleli bhayisikili lebhalansi lengane senzelwe ukuhlehlisa emuva futhi sivimbele ingane ekugingqeni. Ngokuphakama kwesihlalo esifanele, awudingi ukuthi ukhathazeke ngokuthi ingane yakho izokwehla yenyuka.
[Ibhayisikili lokuqala lezingane]: Ibhayisikili leBaby Glide ilula, kuphela u-1.9 kg. Ifanele izingane ezisukela ezinyangeni eziyi-12 kuye kwezingu-36. Izingane zingagibela kuzo njengamathoyizi asendlini nangaphandle. Vumela ingane ifunde ukuhamba ngokujabula!
46.7 x 30.8 x 18.7 cm; 300 Uhlelo Lolimi
Kungani kufanele ukhethe ibhayisikili le-Arkmiido baby balance?
1: Ibhayisikili elilinganiselayo linikeza izingane ithuba lokwakha imisipha yezitho
2: Ibhayisikili elilinganisiwe ngumdlalo wezingane osezingeni eliphakeme
3: Imoto ebhalansi iyindlela engakhuthaza izingane ukuba zihambe ndawonye futhi zithuthukise amakhono ezingane okuxhumana nabantu emisebenzini yeqembu
4: Ibhayisikili elilinganiselwe liyithuluzi elingakhuthaza ukuzethemba, isibindi nomoya wokuzimela wezingane
Usayizi ophelele wezingane, imoto yebhalansi yengane izokwenza ingane yakho ithande lo mdlalo futhi ikusize ukuxazulula inkinga yamathoyizi amaningi asekhaya nokuxakaniseka
Isipho sezingane esithandwa kakhulu Isipho esihle kakhulu sabantwana emicimbini yokuzalwa, emaphathini eshawa, ngamaholide kaKhisimusi noma kwezinye izikhathi. Ngaphezu kwalokho, ingakhuphula imizwa phakathi kwezingane nabazali, okuyinto ebalulekile ezinganeni ukuba zikhule. Amabhayisikili amabhalansi futhi ayizipho ezinhle kubashana, abazukulu nabazukulu.
Incane futhi ilula, kulula ukuyithwala Ibhayisikili lebhalansi lengane nalo lilungele imisebenzi yangaphandle futhi lingaqhutshwa noma nini lapho uku-hangout nomndeni wakho. Ngokushesha lapho ukhuthaza ingane yakho ukuthi izivocavoca umzimba, maningi amathuba okuthi ithuthukise imikhuba yokuphila enempilo.
Langaphambilini Ama-Baby Loopfiets, Rit op Scooter, Fiets voor Kinderen Rijden Speelgoed Balance Loopstoeltje Fiets voor Baby Kid Peuter Indoor Outdoor Activiteiten 6-36 Maanden
Izikuta Ezincane Zamasondo Amancane Abafana Namantombazane
I-Lightweight Kids Scooter 2 Ukuhamba Kwamasondo Okuhamba Ngosana
I-Arkmiido 3-in-1 Scooter Yezingane & ...
Izingane Balance Hamba, Ayikho Pedal Ojahidada nge C ...
I-LBLA Scooter Yabantu Abadala / Intsha, Amasondo Amakhulu Isikuta ...
Baby Balance Hamba, Cute encane Amabhayisikili 12-36 Mon ...
I-Arkmiido Yezingane Balance Bike 10-36 Mo ...